TÜBİTAK 9 Ga-enweta Ndị Ọrụ Nọgide Na-aga n'ihu | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụTÜBİTAK ga-anata ndị ọrụ 9 na-aga n'ihu
06 / 05 / 2020 Ọrụ, General
Tubitak ga na-arụ ọrụ maka ndị ọrụ
TÜBİTAK na-akpọkọta ndị ọrụ 9 na-adịgide adịgide iji rụọ ọrụ na Kocaeli. Requiredfọdụ ọnọdụ pụrụ iche achọrọ maka ndị a na-achọ. A ga-eme akwụkwọ anamachọ ihe dị na Mee 27, 17.00:XNUMX kachasị ọhụrụ. Anaghị anabata ngwa, belụsọ maka ngwa emere site na “Sistem Job Job”.
Ọnọdụ ndị achọrọ maka achọrọ n'ụlọ ọrụ
a) A machibidoro gị ikike ọha.
b) Enweghị ikike isonye na ajụjụ ọnụ a n'ime ọkwa mgbasa ozi ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 na TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.
c) Enweghị ọrịa ma ọ bụ ọrịa na-efe efe nwere ike igbochi ya ịrụ ọrụ ya oge niile.
d) Ewezuga mpụ ndị na-eleghara anya, mpụ ndị a tụgharịrị na mgbakwunye ọzọ maka mkpọrọ na obere oge mkpụmkpụ karịa nke edepụtara n'okpuru; Ọ bụrụgodi na a tụọla ha mkpọrọ ihe karịrị ọnwa isii ma ọ bụ mgbaghara, ha na-eche ihu na mkparị, igwu wayo, izu ohi, izu ohi ruru eru, igwu wayo, igwu wayo, ntụkwasị obi nke enweghị ntụkwasị obi, igwu wayo ohi, igwu wayo, ma ọ bụ igwu wayo. n’abughi ikpe ya maka mpụ ma ọ bụ iberiibe, ịkọwa ihe ndị nwere ikike na usoro azụmaahịa, ịkọwa ihe nzuzo nke ọrụ ahụ, mpụ megide ihe nzuzo nke steeti. Enweghị ndị otu, njikọ ma ọ bụ kọntaktị ya na nhazi, usoro ma ọ bụ otu n'ime oke nke Iwu Iwu 667 ma ọ bụ otu, usoro ma ọ bụ otu ndị Council Security Council kpebiri ka ha mee ihe megide nchedo nke Steti.
e) Ndi n’acho akwukwo agha aghaghi inweta asambodo mmemme ngụcha akwụkwọ nke opekata mpe 4,00 n’ime 2,50. (Na ntụgharị nke ogo ihe nhọpụta ndị oghere mmeri nke sistemụ klas mahadum dị na sistemụ 100 gaa na usoro nke 4, a ga-eji Nhazi Akwụkwọ nke Grades na sistemụ nke 4 na Sistemụ nke 100).
a) Iji tinye maka mgbasa ozi “www.bilgem.tubitak.gov.t bụYoukwesịrị ịdebanye aha na sistemụ ntinye akwụkwọ Job. (Mgbe ị na -eme CV maka ngwa ahụ, aga-etinyerịrị akwụkwọ niile achọrọ na sistemụ elektrọnik wee bụrụ itinye ngwa site na ịhọrọ koodu nrịba ama). Agaghị anara akwụkwọ anamachọihe belụsọ maka ngwa nke sistemu Ngwa Job.
b) Ekwesịrị itinye akwụkwọ anamachọ ihe na-erughị 27 / 05 / 2020: 17: 00.
c) A ga-enyocha ngwa site na koodu ngbasa ozi mgbasa ozi. Ndi umu akwukwo n’enye ha ike itinye ahihia site n’edoro oru ndi ozo. Agaghị atụle akwụkwọ anamachọpụtaghị koodu akwụkwọ maka ya.
d) Dabere na ngalaba (e) nke “Ọnọdụ General Ka Achọrọ maka Ndị Nlere”, ugboro iri ga - akpọ ndị ọrụ ga - ewebata akara ngosi kachasị elu maka ajụjụ ọnụ. Ọ bụrụ na enwere ndị ndọrọndọrọ ndị ọzọ nwere akara nke otu ikpeazụ ha nwere, a ga-akpọ ha maka ajụjụ ọnụ.
e) A ga-enyocha ndị oghere mmeri dịka nkwupute ha banyere na sistemụ ọrụ n'oge ọrụ ha yana ọ bụrụ na ozi etinyere adabaghị ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime akwụkwọ ndị a, a ga-ahụ na ntinye ahụ adịghị mma.
CV dị ugbu a (CV gị kwesịrị iji ya foto ndị nwere agba, gụnyere Turkish, ID na Turkish na akara ekwentị).
Mkpakọrịta ngbako ma ọ bụ Asambodo ọpụpụ.
Asambodo YÖK Alumni (akwụkwọ ntanetị na e-gọọmentị na akara nchịkwa).
Akwụkwọ Ọrụ na Ntanetị Ọrụ ịnshọransị sitere na ndị aga-enwe ahụmahụ.
Akwụkwọ na-egosi ọkwa ndị agha.
Mara: Mmepe niile na ọkwa banyere usoro a ga-ahụ na weebụsaịtị nke Institution (www.bilgem.tubitak.gov.tr/ http://www.tubitak.gov.tr) ga-ekwuwapụta.